Semalt: Izindlela Ezihlukene Zokuqhafaza Iwebhusayithi Yonke
Lezi zinsuku, kwenziwe ngesandla noma ngosizo lwezinhlelo ze-web scraping. Amathuluzi we-web scraping alanda futhi alanda amakhasi akho ukubuka, bese akhipha idatha eveziwe ngaphandle kokuyekethisa kwikhwalithi. Uma ufuna ukususa iwebhusayithi yonke, kufanele usebenzise amanye amasu futhi unakekele ikhwalithi yokuqukethwe.
Ukukhishwa kweMibhalo: Indlela yokukopisha:
Indlela yokuqala neyaziwa kakhulu yokweqa iwebhusayithi yonke i-manual scraping. Kuzodingeka ukopishe futhi unamathisele okuqukethwe kwewebhu ngesandla bese uhlukanisa ngezigaba ezahlukene. Le ndlela isetshenziswa ngabangewona izinhlelo, abakwa-webmasters nama-freelancers ukuthola idatha bese beba okuqukethwe kwewebhu ngaphakathi kwamaminithi ambalwa. Ngokuvamile, abaduni baqalisa leli qhinga futhi basebenzisa amabhuthi ahlukahlukene ukuze baqambe isayithi noma ibhulogi ngesandla.
Izindlela zokuhlunga ezenziwe ngokuzenzakalelayo:
I-DOM noma i-Document Object Model enye indlela ephumelelayo yokukhipha iwebhusayithi. Ngokuvamile ihlangabezana namafayela we-XML futhi isetshenziswe ngabahleli abafuna ukuthola imibono ejulile yedatha yabo ehleliwe. Ungasebenzisa abasebenzisi be-DOM ukuthola ama-node aqukethe ulwazi oluwusizo. I-XPath iyinhlangano ye-DOM enamandla eyenza iwebhusayithi yonke kuwe futhi ingahlanganiswa neziphequluli zewebhu ezigcwele njenge-Chrome, i-Internet Explorer ne-Mozilla. Amawebhusayithi agxiliwe ngale ndlela kufanele abe nokuqukethwe okunamandla kumiphumela oyifunayo.
I-aggregation ebonakalayo ikhethwa yizinkampani ezinkulu nezinkampani ze-IT. Le ndlela isetshenziselwa ukukhomba amawebhusayithi athile namabhulogi kanye nedatha yokuvuna, ukuyigcina efwini. Ukudala nokuqapha kwedatha yezinto eziqondile ezenziwayo kungenziwa ngale ndlela epholile. Ngakho akudingeki ukhathazeke ngekhwalithi yedatha ekhishwe njengoba kuhlale kunhle kakhulu!
i-XPath noma i-XML Path Ulimi yilulimi lombuzo oluvutha idatha kokubili kumadokhumenti akho e-XML nezindawo eziyinkimbinkimbi. Njengoba imibhalo ye-XML inzima ukubhekana nayo, i-XPath yindlela kuphela yokukhipha idatha nokugcina ikhwalithi yayo. Ungasebenzisa le nqubo ngokubambisana ne-DOM ukudlulisa futhi ukhiphe idatha kusuka kokubili ama-blogs namawebhusayithi okuhamba.
Ungasebenzisa i-Google Amadokhumenti njengethuluzi elinamandla lokukhipha futhi ukhiphe idatha kusuka kumawebhusayithi wonke. Idume phakathi kwabachwepheshe kanye nabanikazi bewebhu. Le ndlela iwusizo kulabo abafuna ukususa yonke indawo noma amakhasi ambalwa ngemizuzwana. Ungasebenzisa noma ungasebenzisi i-Data Pattern inketho ukuhlola ikhwalithi yedatha yakho ekhishwe.
Umbhalo Ukulinganisa Iphethini:
Yindlela ejwayelekile yokubonisa indlela engakhipha amawebhusayithi wonke ePython nasePerl. Le ndlela idume phakathi kwabalimi nabathuthukisi futhi kusiza ukwazisa ulwazi kusuka kubhulogi eziyinkimbinkimbi nezitolo zezindaba Source .